नेकपामा पदीय भागवण्डाको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो
नेकपामा पदीय भागवण्डाको ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो गुट चलाउने थाङ्ने हुन्, डल्लुको गुट छैन
कृष्ण गिरी, घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, २१ वैशाख
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक विवादमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि सुरु भएको विवाद अन्ततः पार्टी विभाजनको सन्निकट पुगेर बहुरिएको छ ।यो तर्क हाम्रो होइन, नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनाल शनिवार रातीको सचिवालय बैठकपछि अब नेकपा विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको बताउँछन् । आफू गुटको पक्षपाती नरहेको बताउने खनाल पार्टीभित्र पदीय भागवण्डाको च्याप्टरसमेत सकिएको बताउँछन् ।नेकपाभित्रका बौद्धिक नेताका रूपमा चिनिने झलनाथ खनालसँग शिलापत्रडटकमले नेकपाको विवादको चुरोको वास्ताविकताका विषयमा गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :
सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा जुन विवाद उत्पन्न भएको थियो, त्यो विवाद सचिवालयको बैठकबाट समाधान भएको हो कि केही समयका लागि स्थगित मात्र भएको हो ?
नेकपा ऐतिहासिक प्रोसेसबाट बनेको पार्टी हो । हामीले जुन नीति, विधि र पद्धति अगाडि सारेका थियौँ, त्यो नीति, विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी ठीक ढंगले अगाडि बढ्न सकेन । पार्टी ठीक ढंगले अगाडि नबढेको हो । नीति, विधि र कार्यदिशाअनु्सार पार्टी नचलेपछि समस्या आए । पार्टीभित्र अन्तर्विरोध आए ।
यहीबीचमा पार्टीमा कुनै सरसल्लाह नै नभई सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले २ अध्यादेश ल्याउनुभयो । उक्त अध्यादेशको पार्टीभित्र नै विरोध भयो । विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लियो । फिर्ता लिनुको कारण हो- अध्यादेश ठीक थिएनन् ।
ती अध्यादेशको खुला रूपमा विरोध भयो । पार्टीको, जनताको चाहनाविपरीत, लोकतान्त्रिक विधिअनुकूल रहेनछ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई बोध गरायौँ ।
दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएपछि परिस्थिति फरक भयो । सहज भयो । त्यही सहज बनेको परिस्थितिमा सचिवालयको बैठक बस्यो । यसबाट अहिले नेकपामा एक किसिमको युद्धबिराम भएको छ । फेरि युद्ध हुन्छ अथवा हुँदैन बेग्लै कुरा हो । यो युद्धबिरामलाई स्थायी रूपमा लैजाने कोसिस गर्नेछौँ । स्थायी उन्नतितर्फ लैजानेछौँ ।
पार्टीको र धेरै नेताको असहमतिका बीच प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनुको नियत के होला ?
कसैको नियतको बारेमा थाहा हुँदैन । के नियतले ल्याउनुभएको हो, थाहा छैन ।
पार्टीमा यति धेरै अन्तर्विरोध आउनुको कारण सैद्धान्तिक हो कि शक्ति बाँडफाँटको किचलो हो ?
यसमा सैद्धान्तिक मतभेद छैनन् । पार्टी एकता गर्दा जुन नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा तय गरेका छौँ । त्यो विधानमा किटान नीति, विधि र कार्यदिशामा चल्नुपर्छ । ती नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशालाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जनवादी क्रान्ति पूरा भएको छ । अब समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौँ । अब समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न त्यही किसिमका नीति, पद्धति, कार्यशैली लागू गर्नुपर्छ । त्यो किसिमको नीति, पद्धति र कार्यशैली लागू नहुँदा समस्या आएका हुन् ।
पार्टी नेताहरूबीच केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग थियो, हिजोको सचिवालयबाट सबै नेताहरू यो मागबाट पछाडि हट्नुभएको छ । हिजो मात्र सचिवालयमा के पाक्यो र यो मागबाट सबै नेताहरू पछाडि हट्नुभयो ?
संसारभरको कम्युनिस्ट पार्टी एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तमा चलेको छ । उसो त कहीकहीँ एक व्यक्ति दुई पदमा बसेका पनि छन् । हामीले एक व्यक्ति एक पदमा चल्नै पर्छ । हामीले पार्टी एकता गर्दा २ अध्यक्षको व्यवस्था गरेका छौँ । यो अस्थायी परिदृश्य मात्र हो । २ जना अध्यक्षको व्यवस्था महाधिवेशनसम्म मात्र हो । यसलाई हामीले मानेका छौँ ।
पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद नै हुनुपर्छ । विभिन्न कारणले त्यो पूरा हुन सकेको छैन । यो कुरा स्थापित गर्छौं । यसलाई बदल्नुपर्छ । यसलाई सुधारेर मात्र पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले हामीले ३ तहका सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तीनै तहमा पार्टीले नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्छ । यसका लागि एक पद एक व्यक्तिको प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।
सचिवालयको बैठकले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा सहमति जुटाएको हो ?
सचिवालयको बैठक नयाँ सुरुवात हो । यसले धेरै कुराको छिनोफानो गर्न बाँकी छ । सबै कुराको विश्लेषण गरिसकेको छैन । पार्टी र सरकारको समग्र समीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ । पार्टी र सरकारबीचका अन्तरसम्बन्धको समीक्षा गर्ने पक्षमा छौँ । समग्र कुरालाई नयाँ ढंगले लैजाने तयारीमा छौँ । नयाँ धरातलमा लैजानेछौँ ।
अब आउने स्थायी कमिटीका सदस्यले धेरै कुरा राख्नेछन् । उहाँहरूका अनुभव, उहाँका कुराहरूले यो पार्टीलाई सही दिशामा लैजानेछौँ । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि पार्टीलाई सुधार गरेर लैजानेछौँ ।
१७ गतेसम्म आआफ्ना समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेका नेकपाका नेतृत्वहरू २० गतेको सचिवालय बैठकमा आउँदा किन नरम भएर प्रस्तुत भए । नेताहरूमा पदको बाँडफाँट भएको हो कि ?
नेकपा समाजवाद स्थापना गर्न बनेको पार्टी हो । यो परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण शक्ति हो । यसले समाजवाद ल्याउने हो । समाजवाद ल्याउनमा सिंगो पार्टी एक छ । समाजवादमा मतभेद छैन । समाजवादमा जाने नीति, विधि र सैद्धान्तिक रूपमा मतभेद छैनन् । एकताबद्ध गर्न मतभेद छैनन् तर नेतृत्वको कार्यशैलीका बारेमा मतभेद भए ।
कार्यपद्धतिका बारेमा गम्भीर मतभेद भए । तरिकामा गम्भीर मतभेद सिर्जना भए तर प्रधानमन्त्रीले आफूले पनि आत्मआलोचना गर्छु, तपाईंहरू पनि आत्मआलोचना गर्नुहोस् भन्नुभयो । जे कुरामा कमी कमजोरी भएका छन्, ती कुरा म पनि सुधार्छु, तपाईंहरू पनि सुधार्नुहोस् भन्नुभयो । पार्टी र सरकारलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाऔँ भन्नुभयो ।
यो त मौखिक कुरा हो । नीतिगत प्रस्ताव हो । व्यवहारमा हेर्ने कुरा बाँकी छ । त्यो बाँकी भए पनि हामी बसेर छलफल गरौँ भनेका हौँ । क्रमशः अगाडि बढाउनेछौँ । स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । एकताको प्रक्रियामा जाऔँ भनेका हौँ । तनावको अवस्थाबाट अग्रगतितर्फ लिएर आएका छौँ ।
महाधिवेशनसम्मलाई एक व्यक्ति एक पदको एजेण्डा स्थगित भएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
पार्टीको नीति, विधि र मापदण्ड मान्न दुवै पक्ष सहमत भएका छौँ । कार्यदिशा र सिद्धान्त मान्न हामी सबै सहमत भएका छौँ । यसमा एक व्यक्ति एक पदको प्रणाली पनि पर्छ । यो नीति मान्न सबै तयार छन् । यो कुरा सुधार गरेर अगाडि बढ्न नीतिगत सहमति भएको छ ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री अथवा अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्ने सम्भावना अझै बाँकी छ ?
त्यसबारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । अहिले मुलुकमा अस्थिरता नआओस् भन्ने मान्यतामा छौँ । तर, साथसाथै एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्तलाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । यो कुरालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ । यसका लागि विभिन्न तहमा केही हेरफेर हुन सक्छ ।
भनेपछि, अध्यक्ष तहमा केही समय यो कुरा स्थगित भए पनि प्रदेश तहमा यो कुरा लागू गर्नुपर्छ भनेको हो ? त्यसो हुँदा गण्डकी र प्रदेश ५ मा लागू हुन्छ त यो एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्था ?
पार्टीले नीति बनाएपछि त्यो हुन्छ । यसको मापदण्ड बनाएपछि स्वाभाविक रूपमा पार्टी त्यो नीतिमा चल्नुपर्छ तर अहिले नै पार्टीले यो नीति बनाएको छैन ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भन्ने सचिवालयको निर्णय थाँती रहेको अवस्थामा हिजो फेरि प्रतिनिधिसभामा लैजाने भन्ने निर्णय आयो । यो कस्तो खालको निर्णय हो ?
वामदेव गौतमलाई संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता धेरै पहिलादेखिको हो । यो मान्यता सचिवालयले नै बनाएको हो । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भनेर निर्णय गरियो । संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खोलौँ भन्ने भयो । तर, त्यो सम्भावना धुमिल भएपछि प्रतिनिधिसभामा उहाँलाई निर्वाचित गर्न सहज हुन्छ भनेर संसदमा लैजान खोजेका हौँ ।
केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद छाड्नै पर्ने अडानमा रहेका सचिवालयका नेताहरू एकाएक किन पछाडि हटे ?
त्यो अडान कसले बनाएको थियो, मलाई थाहा छैन । विभिन्न समयमा कामरेडहरूले भनेका कुरालाई, अआफ्ना विचार राख्ने कुरालाई तपार्ईंले अडान भन्नुभएको होला । विभिन्न कामरेडहरूका आआफ्ना सोच थिए । हिजो बैठकमा आउँदा सबैको सोच मिल्यो । अहिलेको कमिटीबाट पास भएका छन् । हिजोको निष्कर्ष सबैको साझा निष्कर्ष हो ।
नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता भएका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ । जनताबाट पराजित वामदेव गौतमलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था नेकपामा किन आइपर्‍यो ?
नेकपामा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दर्जनौँ नेताहरू छन् । उहाँ (वामदेव)को पनि इच्छा, आकाङ्क्षा, चाहना, भावना भएकाले त्यसको सम्मान गरेका हौँ । उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चिता छैन । अहिले पनि धेरै साथीहरू प्रधानमन्त्री हुन योग्य छन् । कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ तर नेकपामा अहिले प्रधानमन्त्री फेर्ने अवस्था आएको छैन ।
आखिर जनताबाट पराजित नेताको चाहना र भावनाको सम्मान गर्ने नाममा सिंगो पार्टीलाई, संविधानलाई, मुलुकलाई बन्धक बनाउन मिल्छ र ?
पार्टीले सबै नेताको योगदानको मूल्याङ्कन गर्छ । विभिन्न ढंगले मूल्याङ्कन गर्छ । कयौँ व्यक्तिको विभिन्न रूपमा मूल्याङ्कन गर्छ । अगाडि बढाउँछ । यो अनौठो कुरा होइन ।
भनेपछि नेताको व्यवस्थापनका लागि पार्टीले यस्ता निर्णय गर्छ ?
नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि, पार्टीको अग्रगतिका लागि, पार्टीको प्रभावकारिताका लागि हो । नेताहरूको विशिष्ट भूमिका हुन्छ । नेताको विशेषता पार्टीले उपयोग गर्छ ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन भन्नुभयो । अस्थिरतातर्फ पार्टी जाँदैन भन्नुभयो तर वामदेव गौतमलाई अगाडि सार्नु भनेको प्रधानमन्त्री बनाउन पनि हो । पार्टीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनै पर्ने कारण के त ?
अहिलेको अवस्थामा तनावको आधारमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आएको हो तर अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । परिवर्तन हुँदैन भन्ने पनि छैन । आवश्यकताअनुसार हुने कुरा हो ।
हिजोको सचिवालय बैठकबाट भैँसेपाटी गठबन्धन भत्केको भन्ने छ नि, के हो ?
तपाईंहरूले केलाई भैँसेपाटी गठबन्धन भन्नुभएको हो, मलाई थाहा छैन । भैँसेपाटीमा कुनै गठबन्धन नै भएको थिएन । हामी बसेर चिया खाएका हौँ । पार्टीका बारेमा कुरा गरेका थियौँ । पार्टीको अग्रगतिका बारेमा कुरा भएका थिए । पार्टीका आन्तरिक विषयमा कुरा गरेका थियौँ । पार्टीका हितमा कुरा गरेका थियौँ ।
कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेका थियौँ । कसरी अगाडि लैजाने भनेर छलफल भएको थियो । त्यही छलफलको परिणाम २० वैशाखको सचिवालय निर्णय भएको हो ।
अन्तर्विरोधका बीचमा नै २ समूहबीच हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? १ दिनमा नै त्यो कसरी साम्य भयो ? जादूको छडी के हो यति छिटो समस्या साम्य हुनुको ?
पार्टीका कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तलाई परिपालन गर्ने सवालमा रहेका समस्याका कारण यस्तो अवस्था आयो । पार्टीभित्र अन्तर्विरोध आएको थियो । यही अन्तर्विरोधका कारण सांसदहरूको हस्ताक्षरसम्म पुगेको हो ।
यो भनेको पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो । पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगे पनि सुझबुझका साथ त्यहाँबाट फिर्ता ल्याएका छौँ । पार्टी गम्भीर अवस्थामा पुगेको थियो । समझदारीका साथ पार्टी पुनः सही ठाउँमा आएको छ ।
अहिले उन्नत किसिमको समझदारी भएको छ । यही समझदारीले पार्टी विभाजनबाट रोकिएको छ । पार्टी एकता र उन्नतितर्फ अगाडि बढेको छ ।
यो एकतामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी शर्मा ओलीले त्याग्नुपर्ने कुरा केके हुन् । कार्यशैली सुधार्ने हो कि कार्यनीतिका कुराहरू ?
यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुनमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको छ । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हामीले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ ।
यसबीचमा जेजे घटना घटे, त्यो जिम्मेवारी महसुस गर्दै आलोचना, आत्मालोचना गर्दै पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अब नयाँ धरातलमा उभिएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ । सञ्चालन गर्नुपर्छ । पार्टीका नीति, कार्यदिशा, सिद्धान्तलाई अनि लक्ष्य, विधि र पद्धतिलाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र यति विवाद आउँदा पनि किन महाधिवेशनको माहोल बनाउन कुनै पनि स्थायी कमिटी सदस्यले कुरा उठाउँदैनन् ?
अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी एकीकरणको काम नै सकिएको छैन । सबै तहको एकीकरण सकेर मात्र त्यतातर्फ जाने हो । पार्टीलाई विधि, विधानमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । एउटै कार्यदिशा, नीति र सिद्धान्तको आधारमा एकताबद्ध बनाउने हो । पार्टी परिचालनको विधि बसालेर मात्र महाधिवेशनमा जान्छौँ ।
अहिले नीतिगत र सिद्धान्तगत अनि कार्यदिशाको विवाद छैन । कार्यशैलीको मात्र समस्या हो । कार्यदिशाको समस्याले कहिलेकाहीँ धेरै ठूलो समस्या आउँछ भन्ने यो उदाहरण हो । यसले पार्टीलाई झण्डै फुटको सङ्घारमा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा नेकपाका नेता, कार्यकर्ताले बुझ्न आवश्यक छ ।
हिजोको सचिवालय बैठकबाट नेकपा फुटको सङ्घारबाट बचेकै हो ?
हो, हिजोको सचिवालयबाट नेकपा फुटको सङ्घारबाट बचेको छ । अब फेरि एकताको मार्गमा, उन्नतिको मार्गमा, रूपान्तरणको मार्गमा गएको छ ।
नेकपालाई फुटबाट बचाउन सबैभन्दा बढी त्याग कसले गरेको हो ?
कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व कुनै एक व्यक्तिको होइन । कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्छ । यो पार्टी एकता हुँदा पनि २ नेताका कारणले भएको होइन । १ जनाको योगदानले बनेको पार्टी होइन । धेरै नेताहरूको सामूहिक चाहनाले एकता भएको हो ।
पार्टी एकता सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताको चाहनाले भएको हो । अहिलेको विभाजन पनि १-२ नेताको चाहनाले रोकिएको होइन । सबै नेताहरूको सामूहिक पहलले रोकिएको हो । यसको श्रेय सबैलाई जान्छ ।
पार्टीमा भौतिक रूपमा एकता भए पनि नेकपामा भावनात्मक एकता नहुँदा भिरमा पुग्छ अनि त्यसबाट तान्नुपर्ने अवस्था आउँछ, यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ, हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७१ वर्षको इतिहास छ । यो ७१ वर्षमा हामीमा धेरै विवाद रहँदै आए । यो ४० वर्षमा त एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने अवस्थामा पनि पुगेका हौँ ।
जब हामीमा साझा कार्यदिशा र नीति मिल्यो, त्यसपछि एकीकरण भएका हौँ । एकीकरण भनेको भौतिक रूपमा मात्र होइन, वैचारिक, सङ्गठनात्मक, भावनात्मक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, कार्यशैलीगत एकीकरण हुन्छ । यो एकीकरण बहुआयामिक छ । यो अहिले पनि जारी छ । पछिसम्म पनि जारी रहने कुरा हो ।
एकता भएपनि नेकपामा अहिले पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी प्रस्ट देखिन्छ नि ?
अहिले नेकपामा यस्तो छैन । यो पार्टी एकीकृत भएको छ । पार्टीभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी छैन । अहिलेको अन्तर्विरोध हेर्ने हो भने पनि त्यो छैन । यहाँ अन्तरघुलन भएको छ । यदि कसैले अझै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्छ भने त्यो थोत्रो, पुरानो र सडेगलेको नारा हो । यदि यस्तो कुरा कसैले गरेको छ भने त्यो नियत खराब भएकाहरूको हो ।
हो, केही किसिमका अवशेष देखिन्छन् तर अन्तरघुलन भएको छ । यही घटनाले पनि देखाइसक्यो । एमाले र माओवादीबीच माया बसिसक्यो । माया मिसाइसक्यौँ ।
नेकपाका बालुवाटार गुट, खुमलटार गुट, कोटेश्वर गुट, भैँसेपाटी गुट र डल्लु गुटले नै पार्टीमा अन्तरघुलन हुन नदिएको भन्ने छ नि ?
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ५० वर्षदेखि गुट सुरु भएका हुन् । यो गुटले कम्युनिस्टको इतिहासलाई तीतो अनुभव दिएको छ । यो तीतो अनुभवबाट हामीले धेरै सिकेका छौँ ।
हामी २०३२ सालदेखि एकता प्रक्रियामा लागेका छौँ । एकीकरण, पुनर्गठन हुँदै यहाँसम्म आएका छौँ । २ पार्टी एकता गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बनाउँदै छौँ ।
अहिले तपाईंले भनेका गुटहरू अवशेष मात्र हुन् । म प्रस्ट रूपमा भनिदिऊँ कि डल्लुको कुनै गुट छैन । हाँसो... ।
मैले गुट बनाएको छैन । म गुटको पक्षमा छैन । पार्टीलाई विचारको आधारमा, नीतिको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा एकीकृत गर्दै समुन्त बनाउनुपर्छ । यदि कसैले गुट बनायो भने त्यसको खैरियत छैन ।
तपाईंले गुट छैन भने पनि हिजोसम्म त कोटेश्वर गुट र बालुवाटार गुटबीच लडाइँ भएको भनिन्छ त ?
यो गलत कुरा हो । नेकपामा गुट छैन । गुट छ भन्नुहुन्छ भने यसबारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस्, खोज्नुहोस् । कार्यशैलीका कारण निस्केका समस्या हुन् यी । यो समस्यामा एक गुटको लडाइँ अर्को गुटसँग होइन । पक्ष-विपक्ष छ ।
नेकपामा गुट छैन भन्नुभयो तर स्थायी कमिटीका सदस्यहरू नै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा बहसमा उत्रिएका छन्, यो गुटको कुरा नभएर के हो ?
यो जसले उठाए पनि थाङ्ने कुरा हो । यो कुनै राजनीतिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत कुरा होइन । पद बाँडफाँट गरेर पार्टी चलाउने कुरा गलत हो । यो निकृष्ट कुरा हो ।
पार्टीलाई पद प्राप्तिको भर्‍याङ बनाउनुहुँदैन । यो अत्यन्त निकृष्ट नीति हो । पार्टी विधि र नीतिअनुसार चल्नुपर्छ । पदहरू भनेका आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुन्छन् । जस्तोः हामीले २ अध्यक्ष बनायौँ । यो आवश्यकताले बनाएको हो ।
२ पार्टीबीच एकता भएको थियो । यसमा धेरै कुराले काम गर्छ । भावनात्मक कुरा थिए । समझदारी बनाउनु थियो । त्यही भएर २ अध्यक्ष बनायौँ । हाम्रो पहिला पनि सचिवको पद मात्र थियो । पछि अध्यक्ष, सचिव बनायौँ । अहिले अध्यक्ष, सचिव, इन्चार्ज बनाएका छौँ ।
पार्टीमा पदलाई नेताहरूमा बाँड्ने होइन । यो अवसरवादी कुरा हो । अहिले भरखर चलेको थियो, ३ अध्यक्ष बनाउने कुरा । यो पनि अवसरवादी कुरा थियो । यसले भनेको नेताहरूलाई पद दिँदा मिल्दा रहेछन् भन्ने सन्देश जान्छ ।
सचिवालय बैठकमा २ अध्यक्षका कुर्सी जोड्ने र छुट्याउने काम त जारी छ नि ?
हा हा हा हा ... ।
नेकपामा पटक पटक निर्णय हुन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् । हिजो (२० वैशाखमा) भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामी विभाजनको सङ्घारमा पुगेर फर्केका छौँ । हामी सांसदहरूको हस्ताक्षर गर्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ । यहाँबाट हामी फर्केर आएका छौँ । त्यो खतरनाक अवस्था थियो । सचिवालयका साथीहरूले यो अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।
अब पार्टीलाई अगाडि बढाएर कसरी लैजाने भनेर गम्भीर हुनुपर्छ । अब पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि पार्टीका नीति, विधि, सिद्धान्तअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसमा पार्टीमा एक व्यक्ति एक पद पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अब एक व्यक्ति एक पदको विषय कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
हिजोको सचिवालय बैठकबाट २ अध्यक्षले पार्टी सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको हो ?
हिजो हामीले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता अथवा चुनावी घोषणापत्रअनुसार सरकार चलाउने भनेझैँ पार्टी र सरकार चल्नुपर्छ । अब घोषणपत्रका मर्म र भावना के हुन् ? यो कुरालाई पूरा गर्नेतर्फ पार्टी र सरकार लाग्नुपर्छ । अहिलेसम्म यी कुरा पालना गर्ने काम भएन । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार पार्टी र सरकार चल्नुपर्छ ।
अब पार्टीमा यसलाई अध्यक्ष र उसलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने बहस चल्दैन ?
अब हामी व्यक्तिका बारेमा धेरै छलफल गर्दैनौँ । अब हामी नीति, कार्यशैलीका बारेमा छलफल गर्छौं । नीतिलाई स्थापित गर्ने काम हुन्छ । जसले यो नीति लागू गर्न सक्दैन, त्यसले आफैँ दायाँबायाँ लाग्नुपर्छ ।
नेकपामा अब नीति र थितिका बारेमा मात्र बहस हुन्छ, पदको बहसको कुरा अब सकियो भन्दा हुन्छ ?
हो, ठीक भन्नुभयो । अब हामी नीति र विधिका बारेमा बहस र छलफल गर्छौं । व्यक्तिका बारेमा कुरा गर्ने समय अहिले स्थगित भएको छ । यो पार्टीलाई समुन्नत र अग्रगामी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्छौं । गतिशील पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउँछौँ ।
नेकपाले चर्चित एमसीसी सम्झौताका बारेमा विवाद भएपछि नेकपाले तपाईंको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । तपाईंहरूले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको छ । अब एमसीसी संसदको यही अधिवेशनमा पास हुन्छ त ?
एमसीसीबारे जुन सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको छ, त्यसमा धेरै समस्या छन् । सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि अमेरिकाका नेताहरूले पनि यसलाई इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेका छन् ।
अमेरिकाले इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भनेर नेपाल सरकारलाई भन्नुपर्‍यो । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार भयो भने हुन्छ । तर, जस्ताको त्यस्तै पास हुन सक्दैन । विवादित कुरा मिलाएर जानुपर्छ । मिलाइएन भने पास हुँदैन । परिमार्जनविना पास हुँदैन । परिमार्जन भएन भने पास हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीले संसदबाट पास गर्न दबाब दिएमा के हुन्छ ?
संसदमा २ आँखा भएकै सांसदहरू छन् । यतिकै पास हुँदैन ।
त्यसो भए यो अधिवेशनमा संसदबाट पास हुँदैन ?
यो अधिवेशनमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबाट परिमार्जन भएर आए पास हुन्छ, नत्र हुँदैन ।
अब प्रधानमन्त्री सच्चिनुभएको हो ?
प्रधानमन्त्री सच्चिने कुराको सुरुवात भएको छ । अझै राम्रोसँग सच्चिनुहोस् । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुहोस् । हामी सबैको सहयोग र साथ रहन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख २१, २०७७, १८:४२:००
कृष्ण गिरी, घनेन्द्र ओझा